Shiinaha ZnS Soo-saare Windows ah iyo Soo-saare | Dien
Dulqaadka dhexroor: + 0.0 / -0.1mm
Dulqaadan dhumucdiisuna: +/- 0.1mm
Sawirka dusha sare: λ / 10 @ 633nm
Is barbar dhig: <1 '
Tayada oogada: Tayada oogada
Cad Cad > 90%
Daahan: Naqshadaynta Custom
ZnS waa kareemooyin muraayadaha indhaha oo aad u muhiim ah oo lagu dabaqay wareejinta IR.
Soo gudbinta kala duwan ee CVD ZnS waa 8um-14um, gudbinta sare, nuugitaan hoose, ZnS oo leh heerar kala duwan iyadoo la adeegsanayo kuleylinta iwm Farsamooyinka cadaadiska durugsan ayaa hagaajiyay gudbinta IR iyo baaxadda muuqata.
Zinc Sulphide waxaa soo saaray iskudhafka Zinc uumiga iyo H2S gas, oo u sameysmaya sidii go'yaal ku jira nugulada Graphite-ka. Zinc Sulphide waa microcrystalline qaab-dhismeedka, cabbirka hadhuudhka oo la xakameeyo si loo soo saaro awoodda ugu badan. Fasalka Multispectral ayaa markaa loo yaqaan 'Hot Isostatically Cadaadis (HIP) si loo hagaajiyo gudbinta dhexe ee IR loona soo saaro foomka muuqda ee muuqda. Hal kristal ZnS ayaa la heli karaa, laakiin maahan wax caadi ah.
Zinc Sulphide wuxuu si weyn u qafiifiyaa 300 ° C, wuxuu muujiyaa cilad caag ah oo qiyaastii ah 500 ° C waxayna kala tagtaa qiyaastii 700 ° C. Nabadgelyada, daaqadaha Zinc Sulphide looma isticmaali karo in ka badan 250 ° C jawiga caadiga ah.
Codsiyada： Qalabka 'optics', elektiroonigga, aaladaha sawir qaadaha.
Isku mid ahaanta indhaha,
iska caabinta nabaad guurka aashitada,
waxqabadka kiimikada oo deggan.
Heer ficil celin sarreeya,
isbeddel sarreeya iyo gudbinta sare gudaha kala duwanaanta la arki karo.
Gudbinta Range: 0.37 ilaa 13.5 μm
Tusmo milicsan: 2.20084 at 10 μm (1)
Loss Milicsiga: 24.7% at 10 (m (2 dusha sare)
Isugeynta Nuugista: 0,0006 cm-1 at 3.8 μm
Reststrahlen Fiinta: 30.5 μm
dn / dT: +38.7 x 10-6 / ° C ilaa 3.39 μm
Cufnaanta: 4.09 g / cc
Barta Dhalaalka: 1827 ° C (Eeg qoraalada hoose)
Kuleylka kuleylka: 27.2 W m-1 K-1 at 298K
Ballaarinta kuleylka: 6.5 x 10-6 / ° C markay tahay 273K
Engegnaantiinna: Knoop 160 oo leh 50g indenter
Awoodda kuleylka gaarka ah: 515 J Kg-1 K-1
Dielectric Constant: 88
Qalabaynta Xirmooyinka (G): n / a
Jumlada Jumlada (K): n / a
Qalabyada laastikada: Ma aha Avalailable
Xadka Xadidan 68.9 MPa (10,000 psi)
Saamiga Poisson: 0.28
Kala-baxa: 65 x 10-6 g / 100g biyo
Miisaanka kelli: 97.43
Fasalka / Qaab-dhismeedka: HIP polycrystalline cubic, ZnS, F42m
Dulqaadka Dhexroor + 0.0 / -0.1mm
Dulqaad la'aanta 0.1mm
Xaqiijinta dusha sare λ/4@632.8nm
Is barbar dhig <1 ′
Tayada oogada 60-40
Daahan Naqshadaynta Custom